Ipie ye-Android 9.0 ngoku isemthethweni: Uhlaziyo luyafumaneka kwiGoogle Pixel | I-Androidsis
Enye yezona mfihlakalo zinkulu kwezi nyanga zidlulileyo yayiza kuba ligama le-Android P.. Zininzi iindlela zokhetho eziqwalaselweyo, kodwa zihlala ligama leswiti. Kodwa, kubonakala ngathi akusayi kufuneka silinde ixesha elide ukufumana oku. Kungenxa yokuba igama elikhethelwe le nguqulo sele lityhiliwe. Ipie ye-Android 9.0 ngoku isemthethweni.
Indlela ethe yenziwa ngayo ukuba ibe semthethweni ibingeyona eyeyona iqhelekileyo, kuba ibikade ihlaziywa ngeGoogle Pixel leyo Sele sisazi malunga nobukho bePie ye-Android 9.0. UGoogle khange abe nzima, kwaye bakhethe iPie (Cake) njengegama lale nguqulo.
Ngaphandle kwesilumkiso, kwaye bezingalindelwanga ezi ndaba. IGoogle Pixel sele ifumene uhlaziyo olusemthethweni kwiPie ye-Android 9.0. Iindaba ezimnandi zabasebenzisi abanazo naziphi na iimodeli zenkampani yaseMelika. Kuba baya kuba ngabokuqala ukonwabela olu hlobo lwaseburhulumenteni.
Inkcazo esemthethweni yenguqulo yenkqubo yokusebenza yayihlelelwe u-Agasti 20, kwaye kubonakala ngathi iyaqhubeka. Nangona ngaphambi kwalo mhla Sele sizazi iinkcukacha eziphambili ngayo. Kudala sazi iindaba zokuba uza kusishiya sibulela kwiinguqulelo ezahlukeneyo zangaphambili zeenyanga.
Kwakhona, ayisiyiyo iGoogle Pixel kuphela eya kuyonwabela iPie ye-Android 9.0. Kwakhona iifowuni nge-Android One sele ziyifumene. Ke luhlaziyo olukhulu lokuba inkampani yaseMelika sele isungule ngokusesikweni. Kwakhona iifowuni ebezikwi-betas ye-Android P sele zinalo olu hlaziyo, okanye ziya kuba nalo kwiiyure ezimbalwa ezizayo.
I-Android 9.0 Pie OTA yeGoogle Pixel kulindeleke ukuba ifumaneke namhlanje.. Zonke iimodeli kufuneka zibenazo ngaxeshanye, kodwa akukho mihla ichaziweyo ngalo mzuzu. Ngoku lixesha lokonwabela zonke iindaba zokuba le nguqulo yenkqubo yokusebenza isishiyile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » Ipie ye-Android 9.0 ilapha: Fumanisa zonke iinkcukacha